IYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
IYunivesithi yaseVirginia (UVA), eyasungulwa ngowe-1819, iyakhukhumeza kwizakhiwo zayo zaseJeffersonian ezikhangayo. U-Thomas Jefferson, umsunguli, wakhuthaza abafundi be-UVA ukuba bafumane imfundo ephakamileyo ngokudala indawo enhle yokufunda. Wafuna abafundi bakhe ukuba baqulunqe uluntu nge-Village Academical Village eququzelelwe iRotunda, iRawn kunye nePavilions. Kule minyaka, i-campus ikhule nombono kaJefferson njengoko uza kubona kwiifoto ezilandelayo.
IYunivesithi yaseVirginia ihamba ngokulinganayo njengenye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu kweli lizwe, kwaye yenza neencwadana ze-About.com College Admissions kwiikholeji eziphambili kumzantsi-mpuma , iikholeji eziphezulu zase- Virginia kunye nezikolo zoshishino eziphezulu kwizikolo zakuqala . Ngamandla ayo okuphanda, u-UVA wanikezelwa ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika, kwaye iinkqubo ezinamandla kwi-liberal arts kunye nezesayensi zathola isahluko seqela elihloniphekileyo le- Phi Beta Kappa .
Ngomfanekiso waseJefferson phambi kwayo, iRotunda imele ngokuziqhenya ekupheleni kweMiddle Academic. UJefferson ufanise iRongunda emva kweRoma yasePalheon, ngoko yintloko yeGosa le-Academical nePavilions kunye negadi ezijikelezile. I-annexe yongezwa kuyo ngo-1853, kodwa ngenxa yomlilo, iindonga zetena zetyhula kuphela zazisinda. I-Rotunda yabuyiselwa kwakhona njengenguqu yezoBugcisa isitayela saseRoma ukuze kwandiswe ilayibrari, yenze indawo yesikhokelo, kwaye ikhulise isibhakabhaka. Namhlanje, iRotunda yenye yezakhiwo zezithonjana ze-UVA campus.
Umtshini kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Lawn kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
Umlanjana ulala phakathi kweRotunda kunye nePavilions ezenza i-Academical Village. Kuthathwa njengento ehloniphekileyo yokuhlala emagumbini aseLwny ehloniphekileyo kuba umntu uya kuhlala kwisiko leyunivesithi nakwezinye izakhiwo zaseJeffersonian zangaphambili. Zibalwa kwakhona phakathi kweyona ndlela ihamba phambili kwiikholejini eziphuma phambili. Amagumbi ayatholakala kuphela kubadala kwaye afike ngokubonelelwa ngokupheleleyo. I-Pavilion nganye ecaleni kweNtshonalanga inempawu ezahlukileyo eziphakamisa isibheno.
I-Pavilion IV kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Pavilion IV kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Pavilion IV kunye namaqabane alo a-9 ahamba kwi-East Lawn njengezindlu zabafundi baseJefferson. Umntu wokuqala ohlala kuyo nguGeorge Blaetterman, uprofesa weeLwimi zanamhlanje, ngasekuqaleni kwe-1800, kodwa xa wayicwebe ebomvu yangaphandle, umfanekiso onqabileyo wawunqambi. Ukugqiba umfanekiso ogqibeleleyo, uJefferson wayefuna izakhamuzi zePavilion ukuba zitshale, ziyile kwaye zigcine ingadi yazo njengeProfesa eyaziwayo uSekle de Vere ebadini emva kwePavilion IV.
Rouss Hall eYunivesithi yaseVirginia
Rouss Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
Ekuqaleni, iRouss Hall yayihlala kwiLebhu yePhysical Laboratory, kodwa ngoku idibana neRobertson Hall ukuya kwi-McIntire School of Commerce. Ezi zombini izakhiwo zihambelana nesimboli esakhiwa yiJeffersonian esakhiwa kwi-campus kwaye idala ubudlelwane obunzima obukufutshane neLawn kunye neenxa zonke. I-McIntire School of Commerce ineprojekthi yoshishino kakhulu enika ama degree amakhosi kwi-Commerce, Accounting, noLawulo.
I-Old Cabell Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Old Cabell Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Old Cabell Hall ihlala ngokusemthethweni kwiKholeji yezoBugcisa nezoSayensi kunye nokubonelela indawo yokudlala umculo. I-auditorium yayo ihleli abantu abangama-994 kwaye inesigqeba esinezikhumba esinikwe ngu-Andrew Carnegie emuva ngo-1906. Ilungu linikezelwe kwiholo ngeli xesha uSamuel Baldwin ebhala ngonyaka emva kokuba ipiyano inikwe. Isigcaziso esishumi elinanye nesigxina esithi "Inkqubela Yomfundi" igxininisa iJefferson kunye nayiphi na enye inzuzo yomfundi yohambo lwabo lwezemfundo kwi-UVA.
Lambeth House kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Lambeth House kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
Into eyayisetyenziselwa ikhaya labucala likaDkt William A. Lambeth, ngoku liyikomkhulu leCandelo leMfundo leCurry. I-Lambeth House iyabonakala ngenxa yombono wayo okhangayo kwigadi zasemgangathweni.
I-Brooks Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Brooks Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Brooks Hall ihlala kwiSebe le-Anthropology kunye neziqephu zayo zeenkcubeko zentlalo, i-archaeological, kunye neelwimi. Isakhiwo ekuqaleni savulwa njengeKhabhinethi yeSayensi yeNdalo, igqityiwe njengemyuziyam enemiboniso yobukhulu bomzimba kunye ne-dinosaur, kodwa ivalwe ngowe-1940. Isakhiwo ngokwazo sasiyinkcazo kwiminyaka yee-1970 kuba i-style yayo yase-Victorian Gothic isakhiwo ehlukile kwiJeffersonian isithethe sezinye izakhiwo kwi-campus. Ngesinye isikhathi, isakhiwo sabhekana nokubhujiswa, kodwa ngenxa yokungenelela koluntu, iBrooks Hall, kunye ne-gargoyles kunye neembali-mlando zendalo ezidumiweyo ezibhalwe kwi-façade yayo yagcinwa.
Ikhasi laseYunivesithi yaseVirginia
Ikhasi laseYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
Unokufumana iNdlu yekhasi kunye namanye amahholo okuhlala kuMmandla weNgingqi yaseMcCormick. I-Page House ibamba abafundi abangama-125 kumagumbi ayo ahlala emibini, ngaphandle kwama-30 amancinane, amagumbi angatshatanga. Igumbi ngalinye linikezelwe ngokupheleleyo ukunceda abafundi bokuqala ukuguqulwa ebomini babo kwikhaya ukuya ku-UVA. Ikhasi laye lafakwa kwintsapho yeendawo zokuhlala ukulungiselela ukwanda kwenani labafundi emva kweMfazwe Yehlabathi II.
I-University Chapel kwi-UVA (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
Inkonzo yaseyunivesiti yakhiwa ngeenkonzo ezingekho phantsi kweenkonzo zamalungu oluntu kunye nokuphendula kwiimangalo zokuthi i-UVA yayingendawo. Ngendlela yokwakha yaseGothic yokuvuselela, isakhiwo saseyunivesithi sakhiwa ukuba sifune ukuya ezulwini. Ngaphakathi, izihlalo zalo ezingama-46 zihlala kwisihlalo sama-250 abantu, kodwa iinkonzo zonqulo azingabanjwanga khona. Kunoko, imitshato kunye neenkonzo zesikhumbuzo zinceda ukugcina isahlulo sisetyenziswe, kungabonakali ukugcinwa kwesakhiwo esikhulu kunye nokulondolozwa kwangaphandle.
Bavaro Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
Bavaro Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
Ngaphambili eyaziwa ngokuba yiCurry School of Education, iBavaro Hall isebenza njengombutho wokuphatha we-UVA. Unamaofisi e-faculty angama-55, amagumbi eenkomfa ezili-10, ii-ofisi zolawulo ezine, iholo yokufundisa kunye ne-atrium ezimbini. Umgangatho wokuqala wesakhiwo unommandla weenkonzo zabafundi, iofisi ye-dean, iinkomfa kunye neendawo zokudibana, kunye ne-coffee bar. Intlangano eyingqayizivele yezitena ezibomvu, i-limestone, kunye nemithi ibonisa ukuhlanganiswa kwezixhobo ezahlukeneyo zokwakha kwakunye neenkonzo zayo ezahlukeneyo kwi-campus.
UClark Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Clark Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Clark Hall isebenza njengekhaya kwiSebe lezeNdalo zeZendalo (Environmental Sciences), eliza kuphuma kwi-ecology, geosciences, hydrology kunye ne-sciences. Ngenxa yobambiswano obuqhubekayo phakathi kwenzululwazi yendalo kunye nobunjineli, iClark Hall ibuye ibuyele izindlu zeBrazil Science kunye neNjineli yeeNjineli ezinika ithuba lokufunda kunye ne-teleconferencing. Kwiminyaka edlulileyo, yayihlala kwiSikole soMthetho, kodwa emva kokuguqulwa kwayo ngo-2003, iimbumba ezimbini kuphela zikhonza njengeziqhelo zesikolo ngokubonakalisa iziganeko kuMthetho kaMoses kunye wamaRoma.
UBryan Hall noMcIntire Amphitheatre kwi-UVA
UBryan Hall kunye noMcIntire Amphitheatre kwi-UVA (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-amphitheatre ibambe iimbuthano zabafundi kunye neziganeko zomculo. Indawo leyo ihlala ibamba iziganeko-nokuba ngaba i-fundraising, i-performances, imikhosi, i-ROTC okanye i-alumni. Ukusetyenziswa kwayo kokuqala kwenzeka ngexesha lokugubha iminyaka eyi-100 ye-UVA, eya kubakho kunye nabameli bakaPoland Wood Wilson. Inhloko yokuqala yeSikolo soBugcisa yenze ikhonkrithi yayo, i-arcing seat in hoping to help the students feel a sense of community within the school.
UBryan Hall, osekufuphi kwinqanaba lezemidlalo, likhaya kwikomiti yesiNgesi yaseYunivesithi yaseVirginia.
ICocke Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
ICocke Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
IHolo leCocke lugqitywa ngowe-1898 kwaye kwasekuqaleni lihlala kwiLebhu yeMechanical. Ngoku, inamacandelo okufundela kunye neeofisi zeeNkcubeko kunye neeFilosofi kunye ne-JS Constantine Library. Abafundi be-Classics majors, i-faculty, kunye ne-grad abafundi banokufikelela kwiiyure ezingama-24 malunga neetekisi ezimashumi amathathu.
IGarrett Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
IGarrett Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Garrett Hall yangena esikhundleni seCarr's Hill njenge "I-Communist" iholo yokudlela ngo-1909. Abalindi babeya kubakhonza ngaloo mihla kwaye ukuba ubenomdla kubo, unokufumana iindawo ezingaphezulu. Ngexesha leMfazwe yeMfazwe ye-II, abalindi babeshintshwa ngumgca wokuzimela. Ekugqibeleni, iGarrett Hall yaba yindawo yeofisi kunye neeplantshi ezisezantsi, ezizaliswe kwi-foyer, kunye nesihlomelo kwiziko lekhompyutha lokuqala. Namhlanje, emva kokulungiswa okuninzi, uGarrett Hall ukhonza njengoFrank Batten School of Leadership and Policy Public.
Gilmer Hall eYunivesithi yaseVirginia
IGolmer Hall eYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Gilmer Hall ihlala kwii-Biology kunye neSebe lezeNgqondo kunye nokuphindwa kabini njengeziko lophando. Kwabizwa ngokuba nguFrancis Walker Gilmer owamnceda uTambert Jefferson ukuba athathe i-faculty ye-UVA yokuqala. IHolo yavulwa ngo-1963 kwaye kukho iiprofesa ezisuka kwi-Gilmer Hall evulekayo eqhubeka nokufundisa kwi-UVA. Amasebe asebenzisana ngokusondeleyo kunye neYunivesithi yeZonyango kunye neZiko leNtaba yeLwandle kunye neZiological kwiiyunivesithi.
IHolo elincinane kwiYunivesithi yaseVirginia
IHolo elincinane kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
IHolo elincinane lavulwa ngo-1911 njengekhaya lokuqala kwiSikolo soMthetho. Ngoku, ixhasa iKholeji yoBugcisa nezoSayensi ngeeklasi kunye neeofisi. IHolo ibonisa ukusetyenziswa kwezakhiwo ezininzi ze-UVA izakhiwo ngenxa ye-1932, yayihlala kwiSebe leNtetho neDrama. Ikholeji yoBugcisa nezoSayensi nayo isebenza ngokusondeleyo neCarter G. Woodson Institute.
Thornton Hall kwiYunivesithi yaseVirginia
I-Thornton Hall kwiYunivesithi yaseVirginia (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Thornton Hall ihlala kwiZikolo zobunjineli kunye ne-Applied Science. Isikolo sinikeza iidridi ezithile kwiikhomputha, ezitshintshileyo, ezomdabu, ezomdabu, ezinokwenziwa kwezinto eziphilayo, zobunjineli, zobunjineli, kunye nobunjineli be-aerospace kunye nezinto zesayensi. Iholo ngoku liphethe iZiko loLuntu oluNyukayo olwandisa ukunyuselwa nokugcinwa kwabemi abangaphantsi kwamalungu kwi-STEM. Iholide iphinde isebenze njengeziko lokuqhubela phambili ku-Energy Initiative kwi-UVA, kwi-Human Interaction-Computer, kunye ne-MAE Design Lab apho iikhompyutha zokusebenza ezingama-20 kunye neprojekthi yezenzululwazi zingasetyenziswa ngabafundi bezobunjineli.
I-UVA Medical School (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
ISikole sezoPhilo lwezeMpilo sibhekiselele kwiZakhiwo zoLwazi lweZonyango zikaClaude Moore eziqulethwe ezimbini-iZiko lokuLawulwa kwezeMpilo kunye neZiko loLwazi lweZiklinikhi. Ngale ndlela, abafundi bangazama ukusebenzisa iyeza kwiinkalo kunye nezandla zabo njengenxalenye esemqoka yemfundo yabo. Ezinye izibonelelo ziquka iLayibrari yezeMpilo ezinika iiyure ezingama-24 kunye nezibonelelo ze-intanethi kwiphando lwezonyango kunye neSifundo soFundo se-Learning interactive. Iziko leCancer, i-Battle Building (isibhedlele sabantwana), kunye nesibhedlele saseYunivesithi (ICU) senza njengezandiso zeSikolo soBuchule ukuze kuthathe imfundo yabafundi bezezifo ngaphandle kweklasi.
I-Library Collections ekhethekileyo kwi-UVA
I-Library Collections ekhethekileyo kwi-UVA (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Allen Grove
I-Iqoqo ekhethekileyo yeThala leencwadi kwi-UVA igqoba imiqulu yeshumi engama-16 yezigidi, iirekhodi zokugcinwa kweencwadi, iincwadi ezinqabileyo, iimephu, ukupapashwa, iifoto kunye nokurekhoda kwevidiyo / ividyo. Ilayibrari iyaziwa ngokuqokelela kwayo yonke i-American and British Literature, imbali malunga neRhulumente waseVirginia, i-UVA, kunye nembali yommandla osezantsi-mpuma we-United States. I-Library Collections ekhethekileyo imele kufuphi ne-Alderman Library, ilayibrari ephambili yeklasi. Ngaphambili kweso sakhiwo, imifanekiso yokwenza isiseko esekelwe kuYohane 8:23 ithi, "Niyakwazi inyaniso, kwaye inyaniso iya kukukhulula" ukukhuthaza abafundi be-UVA ekufuneni kwabo ulwazi.
I-UVA Bookstore (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Allen Grove
Isitoreji seencwadi se-UVA yinkampani engekho ngenzuzo equka ikhemistiki, izikhundla zee-alumni, izinto zokugqwesa iziqu, iincwadi zezifundo, izambatho zomoya kunye nempahla yesikolo. I-bookstore ibonisa ukuzingca kwesikolo esikhulu ngokuthengisa izinto ezitywinwe yi-alumni kunye neencwadi zokugcina izinto malunga ne-UVA neJefferson. Inkqubo ye-Darden Exchange yindlela ekhethekileyo yokuxhasa imali kwiSikolo seBusiness Darden ngelixa i-bookstore ihlinzeka ngeCavalier Computers kunye ne-Outlet ye-UVA. Inxalenye yentengiso yonke ibuyele kwiYunivesithi yeNgcaciso yoBugqibeleleyo, inkqubo yabafundi efundisa imali yokuxhasa abafundi.
Ukuze ufunde kabanzi ngeYunivesithi yaseVirginia kunye noko kuthatha ntoni ukuba ufumane imvume, khangela iprofayile ye-UVA kunye nale GPA, SAT kunye ne-ACT umdwebo we-UVA admissions .
Indlela yokusebenzisa i-Outhaul ye-Sailboat
"Iifutha kwi-Mirror: Crown Heights, eBrooklyn nakweminye impawu"
Ngaba Ukumemeza Kukwenza Uhlabe Ngcono?
Indlela yokudibanisa "i-Pratiquer" (ukuqhuba) ngesiFrentshi
Ngamaqela e-Ice Skating Championships e-Babilonia naseRandy Gardner
UDebi Thomas: uMdlali oyiNtloko kunye noMgqirha
Abafazi Bokholo 2015 - Ukuthandwa - Uhambo Oluhle
Union College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Imibuzo ye 'Moby Dick'
Bhala iziCwangciso zezifundo